Ireo mpitari-dalana ny mozika highlife Igbo ao Nizeria · Global Voices teny Malagasy
Nanasongadina izany fifaliana miaina izany ny mozika highlife any Nizeria
Voadika ny 20 Jona 2022 4:25 GMT
Igbo New Yam Festival ao Dublin. Sary avy amin'i Ji-Elle via Wikimedia Commons, 30 Aogositra 2008. (CC BY-SA 2.0)
Nitàna andraikitra lehibe teo amin'ny sehatra ara-kolontsain'ny firenena ny mozika highlife (karazan-kira Afrikanina) Nizeriana hatramin'ny naha-lasa ho iray amin'ireo karazan-kira malaza indrindra azy tamin'ny taona 1960. Iray amin'ny endriky ny mozika tamin'izany vanim-potoana izany ny fifehezana ireo zavamaneno, izay nasongadina fatratra tao anatin'ny ankamaroan'ny hira. Zava-dehibe izany satria nolalaovina mivantana tamin'ny ankapobeny ny mozika. Nanome hanitra miavaka ho an'ny highlife ny fifangaroan'ny feo amin'ny fitaovana tsotra avo lenta – gitara na piano miaraka amin'ny Ogene, Ichaka, ary Oja. Lohalaharana tamin'ireo fiovana ireo ny mpanakanto Igbo Highlife tamin'ity karazana mozika ity.
Manomboka amin'ny iray amin'ireo mpamoron-kira betsaka indrindra hatramin'ny mpitondra zava-baovaon'ny highlife, misy ny sasany amin'ireo olo-malaza izay nametraka marika manan-danja amin'ity karazana mozika ity.
Sary: Fonon'ny rakikiran'ny lehibe Osita Osadebe ‘Osadebe ‘78 (Vol 2)’
Osita Osadebe (1936-2007), Mpanjakan'ny Highlife any Nizeria, no mpisava lalana amin'ny fiovan'ny fomba fihirana Igbo nentim-paharazana ho lasa highlife. Nanambatra ny rakitry ny antso sy valiny, amin'ny gadona haingana mampandihy ny highlife an'i Osadebe. Natao ho fialamboly amin'ny ankapobeny ny mozikany, ka nahazoany ny anaram-boninahitra hoe “Dokoteran'ny Tosi-drà avo”. Rehefa matotra tamin’ny maha-mpiangaly mozika azy izy dia nitodika tany amin’ny olana ara-tsosialy sy ireo zava-tsarotra natrehiny teo amin’ny fiainana ny lohahevitry ny hirany.
Mpamoron-kira maro, nanoratra hira 500 teo ho eo i Osadebe. Saingy ny tanjaky ny fahaiza-manaony dia ny fitantanany ny lafiny tsirairay amin'ny famokarany ny hirany manomboka amin'ny famoronana ka hatramin'ny fampisehoana mivantana. Araka ny filazan'i Osadebe, dia noho ny tsy fahampian’ny talen’ny mozika sy ny mpanatontosa tamin’izany fotoana no anton'izany. “Ezaka nataon'olona iray tamin'ny ankapobeny izany,” hoy izy tamin'ny tafatafa iray. “Mamorona ny hirako aho, manoratra ny fototra, mandamina, manoratra ny tononkira, ny feo ary mitarika ny tarika.”
Manome fanantenana eo anatrehan'ny zava-tsarotra maro ny ankamaron'ireo hirany toy ny ‘Nwanne m ebizina‘ (aza mitomany rahalahy) na ‘Makojo‘ [anyi ga-ebi] (Tsy maninona izay izay zava-dratsy, [hitohy hiaina isika]). Mirakitra ny fahendrena filôzôfika, noravahana ohabolana Igbo ny iray amin'ireo hirany malaza indrindra, ‘Osondi, Owendi':
Lazaina fa izay mampihiratra ny tena no mampihirana ny chi-any (andriamaniny manokana) / Fa eto amin'ity tontolontsika ity / Iza no lehibe noho Andriamanitra / Izay mihazakazaka haingana kokoa noho ny chi / no tena hiala eo alohan'ny chi-any / Satria izay mampihiratra anao / mety tsy mahafaly ny hafa/ Fa ny anaran'ny mozika ataoko dia/ Osondi owendi (satria mahafaly ny sasany, ka mahatezitra ny hafa)…
Fonon'ny rakikiran'i Oliver de Coque “Biri Ka Mbiri” (Velona ary avelao ho velona, amin'ny teny Igbo)
Oliver de Coque, nomena anarana Oliver Sunday Akanite (1947-2008) tamin'ny fahaterahany, dia mpiangaly mozika sy mpitendry gitara mana-talenta ary manana rakikira 70 mahery. Nampiofanin'i Piccolo, mpitendry gitara Kongoley monina any Nizeria i De Coque. Ahitana ny toetra rehetra ananan'ny highlife ny endri-kirany saingy ahitana talenta amin'ny gitara. Raha ny marina, nametraka ny highlife mifototra amin'ny gitara ho singa mibahan-toerana amin'ity karazan-kira ity i Coque.
Tahaka an'i Osadebe, nihazakazaka lalina tao anatin'ny lahatahiry feno fahendrena momba ny maha Igbo azy i de Coque. Miaraka amin'ny hira toy ny ‘Biri ka m biri‘ (‘Velona ary avelao ho velona’) sy ny ‘Uwa bu aja‘ (‘Fasika fotsiny ity tontolo ity’), nanantitrantitra ny fahamarinana mandrakizay momba ny fiaraha-miaina milamina sy mirindra amin'ny hafa izy, mametraka ao an-tsaina ny tsy faharetan'ny fisiana an-tany.
Na izany aza, nametraka marika i de Coque tamin'ny fampanaovana ho malaza ilay fironana, izay mbola misy hatramin'izao, eo amin'ireo mpiangaly mozika mihira ny fiderana ireo mpikambana manankarena sy malaza eo amin'ny fiarahamonina. ‘Ana Enwe Obodo Enwe’ (‘Misy ireo izay manana trosa amin'ny tanàna’) sy ny ‘Peoples Club of Nigeria (Kliobam-bahoaka ao Nizeria)’ dia manondro ny toe-tsaina Igbo mpandala ny fitoviana izay manasongadina ny indostria, ny dia sy ny paikady ho toy ny mpitondra fanambinana manokana, ary nanome azy ireo ny laza sy voninahitra avy eo.
Mpitondra zava-baovao ny Igbo highlife ihany koa i Mike Ejeagha tamin'ny akuko na egwu, izay midika hoe fitantarana, amin'ny fampiasana hira hitantarana vako-drazana (folklore) Igbo. Miharihary izany amin'ireo hira toa ny ‘Omekagu’ (‘ilay mitondra tena toy ny tigra’) sy ny ‘Enyi Ga Achi‘ (‘Ny elefanta no hanjaka’). Manome fanabeazana ny tononkiran'i Ejeagha, ahitana ireo ohabolana maro be aseho amin'ny fomba didaktika (fampianarana). Izy no olona voalohany nampiasa ity endrika ity amin'ny mozika highlife.
Ao amin'ny ‘Uwa mgbede’ (‘Fiainana amin'ny takariva’) indray, milaza ny tantaran'ny fiainana izy — ny fomba hitomboan'ny olona iray, miasa, ary aorian'izay dia tsy maintsy miatrika ny zava-misy iainan'ny fahanterana (uwa mgbede). Noho izany, tokony tsy haka sarotra amin'ny fiainana ny olona.
Teraka tao Abakaliki, Ebonyi any atsimo atsinanan'i Nizeria i Nico Mbarga (1950-1997), Kameroney-Nizeriana mpiangaly mozika highlife. Malaza amin'ny famoronana fifangaroana (hybrida) tokana amin'ny fitendrena gitara Kongoley sy Nizeriana i Mbarga. Iray amin'ireo hira malaza indrindra any Afrika ny hirany ‘Sweet Mother (Reny Mamy)’ tamin'ny taona tamin'ny 1976 taona, nahalafo kopia 13 tapitrisa. Nadika tamin'ny teny Nizeriana pidgin, mbola tsy lefy laza hatrany ny “Sweet Mother”:
Neny mamy, tsy hanadino anao aho/ Noho ny fahoriana rehetra nanjo anao noho ny amiko/ Neny mamy, tsy hanadino anao aho/ Noho ny fahoriana rehetra nanjo anao noho ny amiko/ Rehefa nitomany aho, i Neny no mitondra ahy/ Hoy izy, ry zanako nahoana ianao no mitomany, eny, eny, mijanona, mijanona, ajanony ajanony, aza mitomany intsony / Rehefa te hatory aho, dia manafosafo ahy ny reniko/ Mametraka ahy eo am-pandriana izy /Manafy lamba ahy izy no mihira hampatory ahy/ Matoria, matoria ry zanako
Araka ny nohamafisin’i Joseph-Achille Mbembe, filôzôfy Kameroney sady manam-pahaizana malaza, “fankalazana ny tsy mety mahalevona ny fiainana ny mozika.” Nanambara tamin'ny fomba hentitra izany fifaliana miaina izany ny mozika highlife any Nizeria.
Jereo eto ny playlist Spotify an'ny Global Voice izay manasongadina ireo sy ireo hira hafa voaràra manerana izao tontolo izao. Raha mila fanazavana fanampiny momba ny mozika voaràra, dia jereo ny fandrakofanay manokana, Striking the Wrong Notes.
Ity misy ny lisitry ny mozika Igbo highlife taloha:
Lalàna vaovao mandrangotra ny fahalalaham-baovao sy fitenenana ao Mozambika